(4) - BookCubicle
Anna : Coffee Chapter (3/5) Thanks for the coffee sis TTK
အပိုငျး - ၄ : ယှနျးခြီက ပိုလှတယျ။
ဒီနကေ့စနနေဖွေ့ဈတယျ။ တောငျပျေါမွို့လေးမှာ ဆောငျးတှငျးမို့ ရာသီဥကတော့ ခပျအေးအေးပဲပေါ့။ ယှနျးခြီ အဝတျအစားလဲပွီး အပွငျထှကျလာတော့ ထူးထူးဆနျးဆနျး မိဘနှဈပါးလုံးက အိမျမှာရှိနခေဲ့တယျ။ ရုံးပိတျရကျဆိုပမေဲ့လညျး အိုဗာတိုငျအမွဲရှိတတျတဲ့ အဖနေဲ့အမေ အိမျမှာရှိနတေော့ ယှနျးခြီနညျးနညျးတောငျ မငျသကျသှားတယျ။ စိတျထဲလညျး သူ ခနျ့ဝသေျောနဲ့ခြိနျးထားတာကို နောငျတရခငျြသလိုလိုပါပဲ။ အဖနေဲ့အမကေ အိမျမှာရှိတာနညျးတယျလေ။ ရှိတုနျးလေး သူ အတူရှိခငျြတာပေါ့။
"ယှနျး သား အပွငျသှားမလို့လား..."
သူ့ ရှညျနတေဲ့ဆံပငျလေးတှကေို သသေသေပျသပျဖွဈအောငျ သူ ကလဈအမညျးလေးနဲ့ဖုံးဖုံးဖိဖိလုပျထားတာကွောငျ့ ယှနျးခြီအဖကေ သားဖွဈသူရဲ့ယောကျြားသိပျမဆနျတဲ့ဟနျကို သိပျဘဝမကပြမေဲ့လညျး မပွောခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အရိပျအကဲသိတဲ့ ယှနျးခြီကတော့ အဖရေဲ့မကျြနှာကဲကို ခကျြခငျြးသိတာကွောငျ့...
"သားဆံပငျတှရှေညျနပွေီလေ... ဒီနသေူ့ငယျခငျြးနဲ့အတူတူ ဆံပငျသှားညှပျမလို့... အခုတောငျကလဈ ကူနရေတယျ ကွညျ့ပါလား..."
သူ့စကားကွောငျ့ အဖမေ့ကျြနှာကွောနညျးနညျးလြော့သှားတာကိုကွညျ့ပွီး ယှနျးခြီသကျပွငျးလေးခိုးခတြယျ။ အမကေတော့ ခပျပွုံးပွုံးပါပဲ။
"သား သူငယျခငျြး လာချေါမှာလား..."
"ဟုတျ သူ အိမျဝရောကျရငျ ဖုနျးဆကျမယျတော့ပွောထားတယျ..."
ပွောရငျးဆိုရငျး အသကျရှညျဦးမဲ့ ကွကျမောကျသီးက ဖုနျးဆကျလာတယျ။ ယှနျးခြီဖုနျးကို ခပျမွနျမွနျပဲကိုငျလိုကျတယျ။ မနညေ့တုနျးက ကွကျမောကျသီးလေး ဖုနျးဆကျတဲ့အခြိနျတုနျးကလို ယှနျးခြီကွောငျကွညျ့မနတေော့ဘူး။ မနတေု့နျးက ဖုနျးကို အကွာကွီး ကွောငျကွညျ့မိနလေို့ ကွကျမောကျသီးက သူ့ကို ငေါကျလိုကျသေးတယျလေ။ ကွောငျကွညျ့မိတာ ယှနျးခြီရဲ့အပွဈတော့လညျး မဟုတျပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ယှနျးခြီရဲ့ Phone content ထဲမှာဆိုရငျ အိမျကအဖနေဲ့အမအေပွငျ ဟနျနာတဈယောကျပဲ ရှိတယျလေ။ အခုတော့ ကွကျမောကျသီးပါ ရှိလာတော့တာပေါ့။
Phone Screen မှာပျေါလာတဲ့နာမညျကွောငျ့ ယှနျးခြီပွုံးမိသေးတယျ။ သူ ကွကျမောကျသီးလို့ နာမညျပေးထားတာ သိရငျ ခနျ့ဝသေျောသူ့ကို တောငျအောကျကို ပဈခလြောကျလား? အယျ သူ တိတျတိတျလေးပဲ နသေငျ့ပါတယျ။ မတျော ကွကျမောကျသီးသိသှားရငျ သူတော့ ဒုက်ခတှရေောကျနပေါဦးမယျ။
သူ့ ဟယျလိုထူးသံကိုတောငျ မစောငျ့ဘဲကွကျမောကျသီးရဲ့ အသံက ဖုနျးထဲကအရငျထှကျလာတယျ။ သူတို့က ဆယျကြျောသကျလေးတှမေို့ ကွကျမောကျသီးရဲ့အသံက လူငယျဆနျတာနဲ့လူပြိုဖျောဝငျပွောငျးတဲ့အသံနဲ့ နှဈမြိုးရောနခေဲ့တယျ။ အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ ဖုနျးထဲမှာ ကွကျမောကျသီးရဲ့အသံက ပိုနားထောငျလို့ကောငျးတယျလို့ ယှနျးခြီထငျတယျ။
"အငျး ငါ အခုလာပွီ..."
ယှနျးခြီချေါလိုကျမလား စဉျးစားပွီးတော့ သူ့အဖကေ ကွကျမောကျသီးကို သဘောမကလြောကျဘူးလို့ စဉျးစားပွီးတော့ သူ ခေါငျးယမျးလိုကျတယျ။ မတျောတဆ သူ အခုမှ အသဈရတဲ့သူငယျခငျြးလေးကို ပထမဆုံးနမှေ့ာကတညျးက သူ့ အဖမေကျြမုနျးကြိုးရငျခကျရခညျြရဲ့။
"ရတယျ... ကြှနျတျောတို့ အပွငျမှာ တဈခုခုစားဖို့ပဲ ပွောထားကွတာ..."
ယှနျးခြီ မုသားဆိုပွီးတော့ ပွေးထှကျသှားလိုကျတယျ။ ဒီရကျထဲ သူ ညာပွောတာတှေ မြားနပွေီပဲ။ သူ့အိမျကို အခုညာတယျ။ အရငျနကေ့တော့ ကွကျမောကျသီးကို အကောငျ့မရှိဘူးလို့ ညာတယျ။ ဒီညဘုရားရှိခိုးရငျတော့ သူ ဘုရားကို တောငျးပနျလိုကျပါမယျလေ။ သူ ညာခဲ့တဲ့ အကွောငျးတှကေိုပေါ့။
ယှနျးခြီအပွငျထှကျလာတော့ လယျသာဂြာကငျအမညျးအောကျခံအဖွူနဲ့ ဘောငျးဘီကာကီရောငျ အောကျကဖိနပျရှညျနဲ့ အပွငျမှာစောငျ့နတေဲ့ ကွကျမောကျသီးကို တှလေို့ကျတယျ။ ကြောငျးဝတျစုံနဲ့သာ သူ့ဒီဇိုငျးက မလိုကျဖကျတာ အခုလို အပွငျဝတျနဲ့ကတြော့လညျး လိုကျဖကျနတောပါပဲ။
"ဆောရီး ငါ နညျးနညျးကွာသှားတယျ... အိမျက..."
တောငျပျေါမွို့လေးက ဒီရကျပိုငျးအအေးလှိုငျးဒဏျကွောငျ့ အခမျြးဒဏျကပိုးနခေဲ့တယျ။ မာဖလာပတျထားပမေဲ့လညျး လမှေုတျထုတျလိုကျတိုငျး ထှကျလာတဲ့ အာငှတှေ့ကေို ကွညျ့နတေဲ့ ကွကျမောကျသီးကို ယှနျးခြီ အားတုံ့အားနာဆိုတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကွကျမောကျသီးက သူ့ကို စကားတဈခှနျးမှ မတုံ့ပွနျခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီအစား သူ့လညျပငျးက မာဖလာကို ယှနျးခြီကို ပတျပေးလာခဲ့တယျ။
"ဘာလို့ မငျး မာဖလာမယူလာတာလဲ ဒီလောကျအေးနတောကို..."
မာဖလာက ကွကျမောကျသီးရဲ့ကိုယျနံ့နဲ့ရမှေေးနံ့ရောနလေို့ပေါ့။ ခပျရဲရဲဖွဈသှားတဲ့ သူ့ မကျြနှာကို ယှနျးခြီမာဖလာနဲ့ ဖုံးတယျ။ မာဖလာကို သူ့မကျြနှာတဈဝကျလောကျထိ ဖုံးလိုကျပွီး သူ ခနျ့ဝသေျောကို ကွညျ့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောကတော့ တံစကျမွိတျမှာခဲနတေဲ့ ရခေဲတှကေို ကွညျ့နလေရေဲ့။
"ငါ ဆိုငျကယျစီးမှာ မငျး အနောကျကနေ ပတျထားလိုကျလေ..."
သူတို့ခြိနျးတဲ့ အခြိနျက ကိုးနာရီကြျောလောကျဖွဈတာကွောငျ့ ယှနျးခြီတိုးတိုးလေးမေးတယျ။ သူကတော့ မနကျစောစာ စားပွီးသှားပွီ။ ယှနျးခြီက မနကျစောစောထတတျတဲ့ကောငျလေးလေ။ မနကေ့ ရခြေိုးပွီးတာတောငျမှ သူ ဒီနထေ့ပျရခြေိုးလာသေးတယျ။ ခမျြးခမျြးစီးစီးဘာလို့ ရခြေိုးလဲမေးရငျ ဒီနကေ့ ခနျ့ဝသေျောနဲ့ အပွငျသှားရမှာမို့လို့ပါပဲ။ ညဈတီးညဈပတျကောငျလေးတဈယောကျ သူ မဖွဈခငျြဘူးလေ။ သူတို့ နတေဲ့မွို့လေးကလညျး ဆောငျးတှငျးရောကျရငျ ရကေို နတေို့ငျးခြိုးဖို့ မလှယျပါဘူး။ အခုလို အအေးလှိုငျးဖွတျနရေငျတော့ သခြောပေါကျပိုဆိုးတာပေါ့။
ဒီလို စှနျ့စှနျ့စားစားရခြေိုးတာက ယှနျးခြီတဈယောကျတညျး မဟုတျပါဘူး။ ခနျ့ဝသေျောလညျး ပါတယျ။ သူတို့အိမျ Boiler ပကျြနလေို့တောငျ သူ ဆဲရေးပွီး ရခြေိုးခဲ့ရသေးတယျ။ မနကေ့ ဦးထုတျမဆောငျးထားတဲ့အရှိနျနဲ့ဆို သူ အအေးပတျပွီး ဖြားပါဖြားခငျြနတေယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး သူ ဒီနေ့ ယှနျးခြီနဲ့တှဖေို့ ခြိနျးထားတာကွောငျ့ ဖွဈအောငျကို ရခြေိုးလာခဲ့တယျ။
ကောငျလေးနှဈယောကျဟာ ကိုယျစီအတှေးနဲ့ရှကျနကွေပွီး ရပျထားတဲ့ဆိုငျကယျတဈစီးနားမှာ တဈယောကျက မာဖလာကိုသူ့မကျြနှာကို ပိုလုံအောငျဆှဲတငျနပွေီး တဈယောကျကတော့ သူ့ဂုတျပိုးကိုသူ ပှတျနခေဲ့တယျ။
"မစားခဲ့ဘူး ဒါပမေဲ့ မငျးဆံပငျညှပျပွီးမှ စားလညျး နောကျမကသြေးပါဘူး..."
ပွောပွီးသူ့စိတျထဲရှကျသလို ခံစားလိုကျရတယျ။ ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျ သူ့ကိုယျသူ ဆဲရေးလိုကျတယျ။ ဘာလို့ သူက ရှကျနတောလဲ။ တကယျဆိုရငျ ရှကျစရာလညျး မလိုဘဲနဲ့! ခနျ့ဝသေျောရဲ့ စိတျထဲမှာ ဘာတှဖွေဈနလေဲဆိုတာကို ယှနျးခြီကတော့ မသိခဲ့ပါဘူး။
သူတို့ရဲ့သှားလမျးက တိတျတိတျဆိတျဆိတျပါပဲ။ ဆံပငျညှပျဆိုငျကောငျးကောငျးသိတယျလို့သာ ခနျ့ဝသေျောပွောတာ။ တကယျတော့ သူ မသိဘူး။ ဒီအတိုငျးယှနျးခြီရဲ့အရှဆေံ့ပငျကွီးက အုပျနတောကွောငျ့ မကျြလုံးလှလှလေးတှကေို သူ မမွငျနိုငျဘူး။ ဒါကွောငျ့အရှဆေံ့ပငျတှကေို သူ ညှပျဖို့တိုကျတှနျးခဲ့တာ။ ဘာကွောငျ့ သူနဲ့ညှပျရအောငျလညျး ပွောလဲဆိုတာကတော့ သူ ယှနျးခြီနဲ့ပိုရငျးနှီးခငျြတယျ။ ယှနျးခြီက သူ့စိတျထဲက နတျဘုရားမလေးနဲ့ တူတာကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျောစိတျထဲမှာ ယှနျးခြီနဲ့ ပိုနီးကပျခငျြတယျ။ ဒါကိုတော့ သူ့စိတျထဲမှာပဲ သူ ထားထားတယျ။ မဟုတျရငျ ယှနျးခြီက သူ့ကို ဒေါသထှကျနိုငျတယျ။ တကယျဆို ယှနျးခြီဒေါသထှကျမှာကို သူ့ စိတျထဲတှေးကွောကျစရာမလိုပါဘဲနဲ့ ဘာလို့ကွောကျနတောလဲဆိုတာကိုလညျး ခနျ့ဝသေျော စိတျထဲမှာ အဖွမေရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီအတိုငျးလေး... ရနျဖွဈလို့ အထိုးခံရ၊ ဒဏျရာအနာတရတှရေတာထကျ သူ့ကို ယှနျးခြီမုနျးမှာကို သူ ကွောကျနရေုံလေးပါ။
ကံတရားကတော့ ခနျ့ဝသေျောဘကျမှာ ရှိနခေဲ့တယျ။ ယှနျးခြီကို သူ ချေါသှားတဲ့ဆိုငျက ယှနျးခြီညှပျနကွေဆိုငျပဲ။ ဆိုငျထဲဝငျဝငျလာခငျြး မာဖလာခြှတျနတေဲ့ ယှနျးခြီကို ဆိုငျကဝနျထမျးကောငျမလေးက နှုတျဆကျလာတယျ။
"ယှနျး ဒီတဈခေါကျတော့ ဟနျနာနဲ့မဟုတျတော့ဘူးပေါ့..."
ယှနျးခြီဘေးက ဆံပငျနီနီနဲ့ကွကျမောကျသီးကို သူတို့တှေ မွငျတာပေါ့။ အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ ကွကျမောကျသီးလေးက ဂဈြတဈတဈသာ ဖွဈတာ။ တကယျတော့ ကောငျခြောလေးတဈယောကျပါ။ သူ့ကိုမွငျတာနဲ့ ကောငျမလေးတှကေ သူတို့အခငျြးခငျြး တီးတိုးပွောလရှေိ့ကွတယျ။ Bad Boy Type ကိုမှကွိုကျပါတယျ ကောငျမလေးတှဆေိုရငျတော့ ကွကျမောကျသီးလေးခနျ့ဝသေျောက သူတို့ရဲ့ Ideal Type ပဲပေါ့။
အခုလညျး ကောငျမလေးတခြို့က ခနျ့ဝသေျောကိုမွငျတာနဲ့ ငှကျကလေးတှလေို တှတျတှတျတှတျတှတျ လုပျနကွေလရေဲ့။ ခနျ့ဝသေျောကတော့ တဈယောကျကိုမှ အရေးမစိုကျခဲ့ဘူး။ သူ့ရငျထဲမှာက သူ့ရဲ့ အလှနတျဘုရားမလေး ယှနျးပဲ ရှိတယျ။ အဲ အခုလောလောဆယျတော့ ယှနျးခြီကို ဆိုငျက ဝနျထမျးကောငျမလေးက ယှနျး လို့ချေါလိုကျတာကွောငျ့ သူ့စိတျထဲ နညျးနညျးလေးခံစားသှားရတယျ။ စဉျးစားကွညျ့ပါဦး... သူရူးသှပျနတေဲ့ကောငျမလေးနဲ့တူတဲ့ကောငျလေးကို အဲ့ကောငျမလေးနာမညျအတိုငျးချေါလိုကျတော့ သူ့ရငျထဲ ဘယျလောကျမြား တဝုနျးဝုနျးဖွဈသှားလိမျ့မလဲ။
ကိုဇှဲဆိုတာ ယှနျးခြီဒီမှာဆံပငျလာညှပျတိုငျး ညှပျပေးနတေဲ့ဆံသဆရာပါ။ ယှနျးခြီနဲ့ဝနျထမျးကောငျမလေးနဲ့စကားနညျးနညျးပွောပွီးတော့ ယှနျးခြီတဈယောကျ ခနျ့ဝသေျောကိုလှညျ့ကွညျ့တယျ။ စိတျထဲမှာတော့ ယှနျးခြီညှပျနကြေ ဆံပငျညှပျဆိုငျဖွဈတာက ငါတော့ကံကောငျးတာပဲလို့ တှေးနမေိပမေဲ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ မကျြနှာကတော့ ခပျတညျတညျပါပဲ။ မသိရငျ မထငျမှတျဘဲ တိုကျဆိုငျသှားသလိုပေါ့။
ယှနျးခြီက လူကွောကျတတျတာကွောငျ့သူက သူရငျးနှီးနကွေလူတဈယောကျမဟုတျဘူးဆိုရငျ သိပျစကားအမြားကွီး မပွောတတျဘူး။ ဝငျဝငျခငျြးသူ့ကိုနှုတျဆကျလာတဲ့ ဝနျထမျးကောငျမလေးရယျ၊ သူ့ကို ဆံပငျညှပျပေးနကြေ ကိုဇှဲမဟုတျဘူးဆိုရငျ ယှနျးခြီ တဈဆိုငျလုံးမှာ ဘယျတဈယောကျကိုမှ စကားမပွောဘူး။ ဟနျနာရဲ့မိတျဆကျပေးထားမှုကွောငျ့ ဆိုငျက လူတျောတျောမြားမြားကလညျး ယှနျးခြီရဲ့ ဒီစရိုကျလေးကို သိကွတယျ။ ဘယျသူမှတော့ ယှနျးခြီကို ငကွောကျလေးလို့ မပွောကွပါဘူး။ ကံကောငျးတယျပဲပွောရမလားပဲ အဲ့ဒီလိုလူကွောကျတဲ့ စရိုကျနဲ့ယှနျးခြီကို သူတို့က အခဈြတောငျ ပိုကွသေးတယျ။ ကြောငျးပွီး လုပျငနျးခှငျဝငျရငျတော့ ယှနျးခြီရဲ့ ဒီအကငျြ့လေးက ပြောကျသှားမှာပါလို့ သူတို့အားပေးကွတယျ။ ယှနျးခြီလညျး သူတို့ပွောသလို ဖွဈလာဖို့ပဲမြှျောလငျ့ပါတယျ။
သူတို့နှဈယောကျအတှကျ ကျောဖီလာခပြေးရငျးကနေ ကောငျမလေးစပျစုတယျ။ ယှနျးခြီကတော့ ရငျးနှီးနတေဲ့ သူဖွဈတာကွောငျ့ အပွုံးနဲ့ပဲ။
"ဟုတျ... သူလညျး ပထမနှဈကြောငျးသားပဲ..."
တကယျဆို ယှနျးခြီတို့က ၁၇ နှဈတောငျ မပွညျ့ကွသေးတဲ့ ကောငျလေးတှပေါ။ သူတို့က အထကျတနျးကြောငျးကို စောစောပွီးခဲ့တာကွောငျ့ အသကျတှလေညျး ခိုးလို့ရတာကိုး။ သူတို့က ဒီအရှယျလေးတှနေဲ့ ပထမနှဈကြောငျးသားတှေ ဖွဈနကွေပွီ။ သူတို့တက်ကသိုလျဆိုတာကလညျး သူတို့ရဲ့မွို့အနအေထားအရဆိုရငျတော့ ကောလိပျသာသာပါပဲ။ ဒီခတျေပညာရေးစနဈမှာ ကောလိပျလို့မသုံးဘူးလေ။ သူတို့က တက်ကသိုလျလို့သုံးကွတယျ။ နောကျပွီး ပါမောက်ခခြုပျကိုတော့ ယှနျးခြီတို့က ပါခြုပျလို့ မချေါတတျကွဘူး။ ကြောငျးအုပျလို့ပဲ ချေါကွတယျ။ သူတို့မွိုကလေးက ခပျကဉျြးကဉျြးပဲမို့ သိပျပွီးတော့ မတှငျကယျြလှပါဘူး။
အမှနျပွောရရငျ ယှနျးခြီကတော့ သူနတေဲ့မွို့လေးကို သူ သဘောကတြယျ။ နညျးနညျးလေး တောကတြယျဆိုပမေဲ့ သူတို့မွို့လေးကနေ တျောတဲ့သူတှအေမြားကွီးထှကျတယျ။ နောကျပွီး သူ့ဇာတိမွို့လေးက သဈပငျကွီးတှေ အုပျအုပျစိုငျးစိုငျး လမျးလညျးကောငျးကောငျးနဲ့ အမှိုကျကငျးစငျပွီး နခေငျြစဖှယျလညျးကောငျးကွတယျ။ အပေါဆုံးကတော့ ခယျြရီနဲ့ မပေယျပငျပဲ။ နောကျပွီး ခတျေမီအသုံးအဆောငျတှလေညျးရှိတယျ။ ဘာကွောငျ့ဆို သူတို့မွို့မှာက တိုငျးတဈပါးမှာ အလုပျသှားလုပျကွတဲ့ သူတှကေ မြားတယျလေ။ ဒီတော့ မြားသောအားဖွငျ့ မွို့မှာရှိတာကအစိုးရဝနျထမျးတှေ၊ မိဘတှနေဲ့ ယှနျးခြီတို့လို ကြောငျးသားလေးတှပေဲ မြားကွတယျ။ ဒါပေါ့ တခြို့ ဒီမွို့က မခှာခငျြတဲ့ သူတှကေလညျး ယှနျးခြီတို့ရဲ့မွို့လေးမှာပဲ အခွခေစြီးပှားရေးလုပျကိုငျကွတာပေါ့။ အခြုပျပွောရရငျတော့ သူတို့မွို့လေးက သိပျခတျေနောကျမကတြဲ့ မွို့လေးပါ။
"မထငျမှတျဘဲ မငျးသိတဲ့ဆိုငျကလညျး ဒီဆိုငျဖွဈနတေယျ..."
ယှနျးခြီစကားကွောငျ့ ကွကျမောကျသီးလေးတဈယောကျ သူ့နားထငျသူကုတျပွနျတယျ။ ဒါက သူ စိတျအိုကျပွီး ရှကျနရေငျ လုပျတတျတဲ့ပွုအမူလေးတဈခုပေါ့။
"အငျး... ငါတို့တူသှားတာပေါ့ မငျး အမွဲတမျး ဒီမှာပဲ ညှပျနကွေလား..."
ဘာကွောငျ့ ယှနျးခြီနဲ့ပတျသကျပွီး မေးခှနျးတှထေုတျနမေိမှနျး သူ့ကိုယျသူနားမလညျနိုငျတော့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ယှနျးခြီနဲ့ပတျသကျပွီး သူ တဈခုပွီးတဈခုသိရတာကို သဘောကတြယျ။
ယှနျးခြီကိုသူ နောကျတဈခှနျးဆကျပွောမဲ့အခြိနျမှာ ဆံပငျညှပျဆရာက အခြိနျကိုကျရောကျလာတော့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျ စိတျကသိကအောကျနဲ့။
ယှနျးခြီဆိုတာကလညျး သူ့ဆံသဆရာလေးရဲ့ အသံကွားတာနဲ့ ဆတျခနဲကောကျထလိုကျတာ ခှေးစာခှကျလေးကိုကျပွီး အမွီးယမျးယမျးနဲ့ သခငျ့ဆီပွေးသှားတဲ့ Pomeranian puppy လေးကနြတောပဲ။ မကမြေနပျနညျးနညျးလေး ဖွဈနရောကနေ ဆံသဆရာက ယှနျးခြီရဲ့ကလဈတှကေိုဖွုတျပွီး ဆံပငျကို ကိုငျကွညျ့တာကို မွငျလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာ ခနျ့ဝကြေျောတဈယောကျ အူနုကြှဲခတျခံလိုကျရသလိုပဲ။ ဆံပငျညှပျတဲ့ခုံပျေါရောကျပွီးမှ ကိုငျတော့ဘာဖွဈမှာမို့လို့လဲ! စိတျတိုစရာကောငျးလိုကျတာ! အဲ့လကျကို ငါ သှားခြိုးလိုကျရ!
အဲ့ဒီလိုနဲ့ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျက ဆံပငျညှပျနတေဲ့အခြိနျတဈခုလုံးကို အံတကွိတျကွိတျနဲ့ကြျောဖွတျခဲ့ရပါတယျ။ ယှနျးခြီကတော့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ စိတျတိုဒေါသတှကေို မသိပမေဲ့ ဆံသဆရာအဈကိုကွီးကတော့ မကျြထောငျ့နီတှကေို ကောငျးကောငျးကွီး လကျခံရရှိနတောပေါ့။
ဆံပငျညှပျပွီးတဲ့အခြိနျမှာတော့ ယှနျးခြီရဲ့ အုနျးမုတျခှကျကဆေံပငျလေးက ယှနျးခြီနဲ့လှပနတေော့တယျ။ အရှကေို့အကုနျခလြိုကျရငျ အုနျမုတျခှကျကလေို အတိဖွဈနမှောကို ယှနျးခြီက နညျးနညျးလေးခှဲထားလရေဲ့။ ပွီးတော့ ဘေးဆံပငျလေးတှကေ ယှနျးခြီနားရှကျလေးတှကေို အုတျထားသေးတယျ။ အုနျးမုတျခှကျကလေို့ သူနာမညျပေးထားတဲ့ hairstyle က ယှနျးခြီနဲ့တော့ လှပနပေါတယျ။
မကျြမှနျလေးပငျ့တငျပွီးပွောတဲ့ ယှနျးခြီကို ခနျ့ဝသေျောကွညျ့တယျ။
မေးသာမေးတယျ။ ပါဝါနဲ့လို့တော့ သူ မထငျပါဘူး။ ယှနျးခြီရဲ့မကျြမှနျကမှနျက တအားပါးလှနျးတယျ။ ဦးလေးရော အဒျေါရောက မကျြမှနျသမားတှမေို့ ပါဝါနဲ့မကျြမှနျတှအေကွောငျးကို သူ ကောငျးကောငျးသိတာပေါ့။
ပိုငျစိုးပိုငျနငျးပဲ ခနျ့ဝသေျောက ဆံသဆရာရှမှေ့တငျ ယှနျးခြီမကျြမှနျကို ဆှဲဖွုတျလိုကျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ အခုလိုပုံစံက သားရဲလေးတဈကောငျက သူ့မိတျဖကျကို တခွားသူမသိဖို့ကို စဈခငျးလိုကျသလိုပါပဲ။ ဆံသဆရာက တအံ့တသွ ကွညျ့ပမေဲ့ ယှနျးခြီကတော့ သူ့မကျြလုံးကိုသူ အုပျနတောကွောငျ့ မသိခဲ့ဘူး။
"ဘာဖွဈလို့လဲ မငျးမကျြလုံးက ဆံပငျမှေးတှေ ဝငျကုနျလို့လား?"
"မဟုတျဘူး ဒါပမေဲ့ ငါ့မကျြလုံးက..."
ယှနျးခြီလကျကို ခနျ့ဝသေျော ဆှဲခလြိုကျတဲ့အခါမှာ ယှနျးခြီရဲ့ မကျြလုံးလေးတှကေ တကယျကိုလှလှလေးတှေ။ သူ ထငျတာမမှားဘဲ တကယျကို သူ့အလှနတျဘုရားမလေးနဲ့တူတယျ။
"မငျး မကျြလုံးတှကေ ယှနျးနဲ့တျောတျောတူတာပဲ..."
တူမှာပေါ့ ငါတို့ကတဈယောကျတညျးပဲကို! ယှနျးခြီစိတျထဲကနေ ခနျ့ဝသေျောကို ငတုံးလို့ကြိနျဆဲလိုကျပွီးတော့ ခနျ့ဝသေျော လကျထဲက သူ့မကျြမှနျကို ပွနျလုတယျ။ နောကျတော့ သူ ခနျ့ဝသေျောကို ဘုကွညျ့ကွညျ့ပွီးတော့...
"အဲ့ဒါကွောငျ့ မကျြမှနျတပျထားတာ ဟုတျပွီလား..."
စိတျတိုတိုနဲ့ မကျြမှနျတပျနတေဲ့ယှနျးခြီကို ခနျ့ဝသေျောကွညျ့တယျ။ ငှရှေငျးကောငျတာကို ခွလှေမျးမဲ့အခြိနျမှာ သူ ခပျတိုးတိုးလေးပွောလရေဲ့။ ယှနျးခြီနဲ့သူ နှဈယောကျတညျးကွားမဲ့ အသံမြိုးနဲ့ပေါ့။
ခနျ့ဝသေျောစကားက ယှနျးခြီကို စတျောဘယျရီသီးတဈလုံးလို နီရဲသှားစခေဲ့တယျ။
"ငါတို့ မနကျစာစားရဦးမယျ... သှားမယျ..."
ပွောပွီးတာနဲ့ ယှနျးခြီ မပွေးရုံတမယျ ငှရှေငျးကောငျတာကို ထှကျသှားတော့တယျ။ ယှနျးက လှတယျဆိုပမေဲ့ ယှနျးခြီကို လှတယျလို့ ဘယျသူမှ မပွောဖူးပါဘူး။ ယှနျးခြီကို ပိုလှတယျလို့ တဈယောကျယောကျက ပွောလာမယျလို့ ယှနျးခြီအိပျမကျတောငျမမကျဖူးဘူး။ သူ့မကျြနှာက ကွကျဥတဈလုံးကွျောလို့ရလောကျအောငျကို ပူပွီးနီနတေယျ။ သူ့ရငျကလညျး တဒိတျဒိတျနဲ့ပေါ့။ ခွလှေမျးကြဲတှနေဲ့ ငှရှေငျးကောငျတာကို ထှကျသှားတဲ့ ယှနျးခြီကိုလိုကျမီအောငျ ခနျ့ဝသေျော ဘယျလောကျမှတော့ မလိုကျရပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ယှနျးခြီခွထေောကျလေးတှကေ သူ့လောကျမှ မရှညျတာ။ ဒီလိုနဲ့ကောငျလေးနှဈယောကျဟာ မနကျစာကို နလေ့ညျမရောကျခငျမှာ စားဖို့ထှကျသှားခဲ့ကွပါတယျ။
အပိုင်း - ၄ : ယွန်းချီက ပိုလှတယ်။
ဒီနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်တယ်။ တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာ ဆောင်းတွင်းမို့ ရာသီဥကတော့ ခပ်အေးအေးပဲပေါ့။ ယွန်းချီ အဝတ်အစားလဲပြီး အပြင်ထွက်လာတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း မိဘနှစ်ပါးလုံးက အိမ်မှာရှိနေခဲ့တယ်။ ရုံးပိတ်ရက်ဆိုပေမဲ့လည်း အိုဗာတိုင်အမြဲရှိတတ်တဲ့ အဖေနဲ့အမေ အိမ်မှာရှိနေတော့ ယွန်းချီနည်းနည်းတောင် မင်သက်သွားတယ်။ စိတ်ထဲလည်း သူ ခန့်ဝေသော်နဲ့ချိန်းထားတာကို နောင်တရချင်သလိုလိုပါပဲ။ အဖေနဲ့အမေက အိမ်မှာရှိတာနည်းတယ်လေ။ ရှိတုန်းလေး သူ အတူရှိချင်တာပေါ့။
"ယွန်း သား အပြင်သွားမလို့လား..."
သူ့ ရှည်နေတဲ့ဆံပင်လေးတွေကို သေသေသပ်သပ်ဖြစ်အောင် သူ ကလစ်အမည်းလေးနဲ့ဖုံးဖုံးဖိဖိလုပ်ထားတာကြောင့် ယွန်းချီအဖေက သားဖြစ်သူရဲ့ယောကျာ်းသိပ်မဆန်တဲ့ဟန်ကို သိပ်ဘဝမကျပေမဲ့လည်း မပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရိပ်အကဲသိတဲ့ ယွန်းချီကတော့ အဖေ့ရဲ့မျက်နှာကဲကို ချက်ချင်းသိတာကြောင့်...
"သားဆံပင်တွေရှည်နေပြီလေ... ဒီနေ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ ဆံပင်သွားညှပ်မလို့... အခုတောင်ကလစ် ကူနေရတယ် ကြည့်ပါလား..."
သူ့စကားကြောင့် အဖေ့မျက်နှာကြောနည်းနည်းလျော့သွားတာကိုကြည့်ပြီး ယွန်းချီသက်ပြင်းလေးခိုးချတယ်။ အမေကတော့ ခပ်ပြုံးပြုံးပါပဲ။
"သား သူငယ်ချင်း လာခေါ်မှာလား..."
"ဟုတ် သူ အိမ်ဝရောက်ရင် ဖုန်းဆက်မယ်တော့ပြောထားတယ်..."
ပြောရင်းဆိုရင်း အသက်ရှည်ဦးမဲ့ ကြက်မောက်သီးက ဖုန်းဆက်လာတယ်။ ယွန်းချီဖုန်းကို ခပ်မြန်မြန်ပဲကိုင်လိုက်တယ်။ မနေ့ညတုန်းက ကြက်မောက်သီးလေး ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်တုန်းကလို ယွန်းချီကြောင်ကြည့်မနေတော့ဘူး။ မနေ့တုန်းက ဖုန်းကို အကြာကြီး ကြောင်ကြည့်မိနေလို့ ကြက်မောက်သီးက သူ့ကို ငေါက်လိုက်သေးတယ်လေ။ ကြောင်ကြည့်မိတာ ယွန်းချီရဲ့အပြစ်တော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ယွန်းချီရဲ့ Phone content ထဲမှာဆိုရင် အိမ်ကအဖေနဲ့အမေအပြင် ဟန်နာတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်လေ။ အခုတော့ ကြက်မောက်သီးပါ ရှိလာတော့တာပေါ့။
Phone Screen မှာပေါ်လာတဲ့နာမည်ကြောင့် ယွန်းချီပြုံးမိသေးတယ်။ သူ ကြက်မောက်သီးလို့ နာမည်ပေးထားတာ သိရင် ခန့်ဝေသော်သူ့ကို တောင်အောက်ကို ပစ်ချလောက်လား? အယ် သူ တိတ်တိတ်လေးပဲ နေသင့်ပါတယ်။ မတော် ကြက်မောက်သီးသိသွားရင် သူတော့ ဒုက္ခတွေရောက်နေပါဦးမယ်။
သူ့ ဟယ်လိုထူးသံကိုတောင် မစောင့်ဘဲကြက်မောက်သီးရဲ့ အသံက ဖုန်းထဲကအရင်ထွက်လာတယ်။ သူတို့က ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေမို့ ကြက်မောက်သီးရဲ့အသံက လူငယ်ဆန်တာနဲ့လူပျိုဖော်ဝင်ပြောင်းတဲ့အသံနဲ့ နှစ်မျိုးရောနေခဲ့တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဖုန်းထဲမှာ ကြက်မောက်သီးရဲ့အသံက ပိုနားထောင်လို့ကောင်းတယ်လို့ ယွန်းချီထင်တယ်။
"အင်း ငါ အခုလာပြီ..."
ယွန်းချီခေါ်လိုက်မလား စဉ်းစားပြီးတော့ သူ့အဖေက ကြက်မောက်သီးကို သဘောမကျလောက်ဘူးလို့ စဉ်းစားပြီးတော့ သူ ခေါင်းယမ်းလိုက်တယ်။ မတော်တဆ သူ အခုမှ အသစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းလေးကို ပထမဆုံးနေ့မှာကတည်းက သူ့ အဖေမျက်မုန်းကျိုးရင်ခက်ရချည်ရဲ့။
"ရတယ်... ကျွန်တော်တို့ အပြင်မှာ တစ်ခုခုစားဖို့ပဲ ပြောထားကြတာ..."
ယွန်းချီ မုသားဆိုပြီးတော့ ပြေးထွက်သွားလိုက်တယ်။ ဒီရက်ထဲ သူ ညာပြောတာတွေ များနေပြီပဲ။ သူ့အိမ်ကို အခုညာတယ်။ အရင်နေ့ကတော့ ကြက်မောက်သီးကို အကောင့်မရှိဘူးလို့ ညာတယ်။ ဒီညဘုရားရှိခိုးရင်တော့ သူ ဘုရားကို တောင်းပန်လိုက်ပါမယ်လေ။ သူ ညာခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကိုပေါ့။
ယွန်းချီအပြင်ထွက်လာတော့ လယ်သာဂျာကင်အမည်းအောက်ခံအဖြူနဲ့ ဘောင်းဘီကာကီရောင် အောက်ကဖိနပ်ရှည်နဲ့ အပြင်မှာစောင့်နေတဲ့ ကြက်မောက်သီးကို တွေ့လိုက်တယ်။ ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့သာ သူ့ဒီဇိုင်းက မလိုက်ဖက်တာ အခုလို အပြင်ဝတ်နဲ့ကျတော့လည်း လိုက်ဖက်နေတာပါပဲ။
"ဆောရီး ငါ နည်းနည်းကြာသွားတယ်... အိမ်က..."
တောင်ပေါ်မြို့လေးက ဒီရက်ပိုင်းအအေးလှိုင်းဒဏ်ကြောင့် အချမ်းဒဏ်ကပိုးနေခဲ့တယ်။ မာဖလာပတ်ထားပေမဲ့လည်း လေမှုတ်ထုတ်လိုက်တိုင်း ထွက်လာတဲ့ အာငွေ့တွေကို ကြည့်နေတဲ့ ကြက်မောက်သီးကို ယွန်းချီ အားတုံ့အားနာဆိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြက်မောက်သီးက သူ့ကို စကားတစ်ခွန်းမှ မတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီအစား သူ့လည်ပင်းက မာဖလာကို ယွန်းချီကို ပတ်ပေးလာခဲ့တယ်။
"ဘာလို့ မင်း မာဖလာမယူလာတာလဲ ဒီလောက်အေးနေတာကို..."
မာဖလာက ကြက်မောက်သီးရဲ့ကိုယ်နံ့နဲ့ရေမွှေးနံ့ရောနေလို့ပေါ့။ ခပ်ရဲရဲဖြစ်သွားတဲ့ သူ့ မျက်နှာကို ယွန်းချီမာဖလာနဲ့ ဖုံးတယ်။ မာဖလာကို သူ့မျက်နှာတစ်ဝက်လောက်ထိ ဖုံးလိုက်ပြီး သူ ခန့်ဝေသော်ကို ကြည့်တယ်။ ခန့်ဝေသော်ကတော့ တံစက်မြိတ်မှာခဲနေတဲ့ ရေခဲတွေကို ကြည့်နေလေရဲ့။
"ငါ ဆိုင်ကယ်စီးမှာ မင်း အနောက်ကနေ ပတ်ထားလိုက်လေ..."
သူတို့ချိန်းတဲ့ အချိန်က ကိုးနာရီကျော်လောက်ဖြစ်တာကြောင့် ယွန်းချီတိုးတိုးလေးမေးတယ်။ သူကတော့ မနက်စောစာ စားပြီးသွားပြီ။ ယွန်းချီက မနက်စောစောထတတ်တဲ့ကောင်လေးလေ။ မနေ့က ရေချိုးပြီးတာတောင်မှ သူ ဒီနေ့ထပ်ရေချိုးလာသေးတယ်။ ချမ်းချမ်းစီးစီးဘာလို့ ရေချိုးလဲမေးရင် ဒီနေ့က ခန့်ဝေသော်နဲ့ အပြင်သွားရမှာမို့လို့ပါပဲ။ ညစ်တီးညစ်ပတ်ကောင်လေးတစ်ယောက် သူ မဖြစ်ချင်ဘူးလေ။ သူတို့ နေတဲ့မြို့လေးကလည်း ဆောင်းတွင်းရောက်ရင် ရေကို နေ့တိုင်းချိုးဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အခုလို အအေးလှိုင်းဖြတ်နေရင်တော့ သေချာပေါက်ပိုဆိုးတာပေါ့။
ဒီလို စွန့်စွန့်စားစားရေချိုးတာက ယွန်းချီတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ခန့်ဝေသော်လည်း ပါတယ်။ သူတို့အိမ် Boiler ပျက်နေလို့တောင် သူ ဆဲရေးပြီး ရေချိုးခဲ့ရသေးတယ်။ မနေ့က ဦးထုတ်မဆောင်းထားတဲ့အရှိန်နဲ့ဆို သူ အအေးပတ်ပြီး ဖျားပါဖျားချင်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူ ဒီနေ့ ယွန်းချီနဲ့တွေ့ဖို့ ချိန်းထားတာကြောင့် ဖြစ်အောင်ကို ရေချိုးလာခဲ့တယ်။
ကောင်လေးနှစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်စီအတွေးနဲ့ရှက်နေကြပြီး ရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနားမှာ တစ်ယောက်က မာဖလာကိုသူ့မျက်နှာကို ပိုလုံအောင်ဆွဲတင်နေပြီး တစ်ယောက်ကတော့ သူ့ဂုတ်ပိုးကိုသူ ပွတ်နေခဲ့တယ်။
"မစားခဲ့ဘူး ဒါပေမဲ့ မင်းဆံပင်ညှပ်ပြီးမှ စားလည်း နောက်မကျသေးပါဘူး..."
ပြောပြီးသူ့စိတ်ထဲရှက်သလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက် သူ့ကိုယ်သူ ဆဲရေးလိုက်တယ်။ ဘာလို့ သူက ရှက်နေတာလဲ။ တကယ်ဆိုရင် ရှက်စရာလည်း မလိုဘဲနဲ့! ခန့်ဝေသော်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကို ယွန်းချီကတော့ မသိခဲ့ပါဘူး။
သူတို့ရဲ့သွားလမ်းက တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပါပဲ။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းသိတယ်လို့သာ ခန့်ဝေသော်ပြောတာ။ တကယ်တော့ သူ မသိဘူး။ ဒီအတိုင်းယွန်းချီရဲ့အရှေ့ဆံပင်ကြီးက အုပ်နေတာကြောင့် မျက်လုံးလှလှလေးတွေကို သူ မမြင်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်အရှေ့ဆံပင်တွေကို သူ ညှပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာ။ ဘာကြောင့် သူနဲ့ညှပ်ရအောင်လည်း ပြောလဲဆိုတာကတော့ သူ ယွန်းချီနဲ့ပိုရင်းနှီးချင်တယ်။ ယွန်းချီက သူ့စိတ်ထဲက နတ်ဘုရားမလေးနဲ့ တူတာကြောင့် ခန့်ဝေသော်စိတ်ထဲမှာ ယွန်းချီနဲ့ ပိုနီးကပ်ချင်တယ်။ ဒါကိုတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာပဲ သူ ထားထားတယ်။ မဟုတ်ရင် ယွန်းချီက သူ့ကို ဒေါသထွက်နိုင်တယ်။ တကယ်ဆို ယွန်းချီဒေါသထွက်မှာကို သူ့ စိတ်ထဲတွေးကြောက်စရာမလိုပါဘဲနဲ့ ဘာလို့ကြောက်နေတာလဲဆိုတာကိုလည်း ခန့်ဝေသော် စိတ်ထဲမှာ အဖြေမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီအတိုင်းလေး... ရန်ဖြစ်လို့ အထိုးခံရ၊ ဒဏ်ရာအနာတရတွေရတာထက် သူ့ကို ယွန်းချီမုန်းမှာကို သူ ကြောက်နေရုံလေးပါ။
ကံတရားကတော့ ခန့်ဝေသော်ဘက်မှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ ယွန်းချီကို သူ ခေါ်သွားတဲ့ဆိုင်က ယွန်းချီညှပ်နေကြဆိုင်ပဲ။ ဆိုင်ထဲဝင်ဝင်လာချင်း မာဖလာချွတ်နေတဲ့ ယွန်းချီကို ဆိုင်ကဝန်ထမ်းကောင်မလေးက နှုတ်ဆက်လာတယ်။
"ယွန်း ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဟန်နာနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့..."
ယွန်းချီဘေးက ဆံပင်နီနီနဲ့ကြက်မောက်သီးကို သူတို့တွေ မြင်တာပေါ့။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကြက်မောက်သီးလေးက ဂျစ်တစ်တစ်သာ ဖြစ်တာ။ တကယ်တော့ ကောင်ချောလေးတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ ကောင်မလေးတွေက သူတို့အချင်းချင်း တီးတိုးပြောလေ့ရှိကြတယ်။ Bad Boy Type ကိုမှကြိုက်ပါတယ် ကောင်မလေးတွေဆိုရင်တော့ ကြက်မောက်သီးလေးခန့်ဝေသော်က သူတို့ရဲ့ Ideal Type ပဲပေါ့။
အခုလည်း ကောင်မလေးတချို့က ခန့်ဝေသော်ကိုမြင်တာနဲ့ ငှက်ကလေးတွေလို တွတ်တွတ်တွတ်တွတ် လုပ်နေကြလေရဲ့။ ခန့်ဝေသော်ကတော့ တစ်ယောက်ကိုမှ အရေးမစိုက်ခဲ့ဘူး။ သူ့ရင်ထဲမှာက သူ့ရဲ့ အလှနတ်ဘုရားမလေး ယွန်းပဲ ရှိတယ်။ အဲ အခုလောလောဆယ်တော့ ယွန်းချီကို ဆိုင်က ဝန်ထမ်းကောင်မလေးက ယွန်း လို့ခေါ်လိုက်တာကြောင့် သူ့စိတ်ထဲ နည်းနည်းလေးခံစားသွားရတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး... သူရူးသွပ်နေတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တူတဲ့ကောင်လေးကို အဲ့ကောင်မလေးနာမည်အတိုင်းခေါ်လိုက်တော့ သူ့ရင်ထဲ ဘယ်လောက်များ တဝုန်းဝုန်းဖြစ်သွားလိမ့်မလဲ။
ကိုဇွဲဆိုတာ ယွန်းချီဒီမှာဆံပင်လာညှပ်တိုင်း ညှပ်ပေးနေတဲ့ဆံသဆရာပါ။ ယွန်းချီနဲ့ဝန်ထမ်းကောင်မလေးနဲ့ စကားနည်းနည်းပြောပြီးတော့ ယွန်းချီတစ်ယောက် ခန့်ဝေသော်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ယွန်းချီညှပ်နေကျ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ဖြစ်တာက ငါတော့ကံကောင်းတာပဲလို့ တွေးနေမိပေမဲ့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ မျက်နှာကတော့ ခပ်တည်တည်ပါပဲ။ မသိရင် မထင်မှတ်ဘဲ တိုက်ဆိုင်သွားသလိုပေါ့။
ယွန်းချီက လူကြောက်တတ်တာကြောင့်သူက သူရင်းနှီးနေကြလူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် သိပ်စကားအများကြီး မပြောတတ်ဘူး။ ဝင်ဝင်ချင်းသူ့ကိုနှုတ်ဆက်လာတဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်မလေးရယ်၊ သူ့ကို ဆံပင်ညှပ်ပေးနေကျ ကိုဇွဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ယွန်းချီ တစ်ဆိုင်လုံးမှာ ဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှ စကားမပြောဘူး။ ဟန်နာရဲ့မိတ်ဆက်ပေးထားမှုကြောင့် ဆိုင်က လူတော်တော်များများကလည်း ယွန်းချီရဲ့ ဒီစရိုက်လေးကို သိကြတယ်။ ဘယ်သူမှတော့ ယွန်းချီကို ငကြောက်လေးလို့ မပြောကြပါဘူး။ ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမလားပဲ အဲ့ဒီလိုလူကြောက်တဲ့ စရိုက်နဲ့ယွန်းချီကို သူတို့က အချစ်တောင် ပိုကြသေးတယ်။ ကျောင်းပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရင်တော့ ယွန်းချီရဲ့ ဒီအကျင့်လေးက ပျောက်သွားမှာပါလို့ သူတို့အားပေးကြတယ်။ ယွန်းချီလည်း သူတို့ပြောသလို ဖြစ်လာဖို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် ကော်ဖီလာချပေးရင်းကနေ ကောင်မလေးစပ်စုတယ်။ ယွန်းချီကတော့ ရင်းနှီးနေတဲ့ သူဖြစ်တာကြောင့် အပြုံးနဲ့ပဲ။
"ဟုတ်... သူလည်း ပထမနှစ်ကျောင်းသားပဲ..."
တကယ်ဆို ယွန်းချီတို့က ၁၇ နှစ်တောင် မပြည့်ကြသေးတဲ့ ကောင်လေးတွေပါ။ သူတို့က အထက်တန်းကျောင်းကို စောစောပြီးခဲ့တာကြောင့် အသက်တွေလည်း ခိုးလို့ရတာကိုး။ သူတို့က ဒီအရွယ်လေးတွေနဲ့ ပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်နေကြပြီ။ သူတို့တက္ကသိုလ်ဆိုတာကလည်း သူတို့ရဲ့မြို့အနေအထားအရဆိုရင်တော့ ကောလိပ်သာသာပါပဲ။ ဒီခေတ်ပညာရေးစနစ်မှာ ကောလိပ်လို့မသုံးဘူးလေ။ သူတို့က တက္ကသိုလ်လို့သုံးကြတယ်။ နောက်ပြီး ပါမောက္ခချုပ်ကိုတော့ ယွန်းချီတို့က ပါချုပ်လို့ မခေါ်တတ်ကြဘူး။ ကျောင်းအုပ်လို့ပဲ ခေါ်ကြတယ်။ သူတို့မြိုကလေးက ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းပဲမို့ သိပ်ပြီးတော့ မတွင်ကျယ်လှပါဘူး။
အမှန်ပြောရရင် ယွန်းချီကတော့ သူနေတဲ့မြို့လေးကို သူ သဘောကျတယ်။ နည်းနည်းလေး တောကျတယ်ဆိုပေမဲ့ သူတို့မြို့လေးကနေ တော်တဲ့သူတွေအများကြီးထွက်တယ်။ နောက်ပြီး သူ့ဇာတိမြို့လေးက သစ်ပင်ကြီးတွေ အုပ်အုပ်စိုင်းစိုင်း လမ်းလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ အမှိုက်ကင်းစင်ပြီး နေချင်စဖွယ်လည်းကောင်းကြတယ်။ အပေါဆုံးကတော့ ချယ်ရီနဲ့ မေပယ်ပင်ပဲ။ နောက်ပြီး ခေတ်မီအသုံးအဆောင်တွေလည်းရှိတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို သူတို့မြို့မှာက တိုင်းတစ်ပါးမှာ အလုပ်သွားလုပ်ကြတဲ့ သူတွေက များတယ်လေ။ ဒီတော့ များသောအားဖြင့် မြို့မှာရှိတာကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေ၊ မိဘတွေနဲ့ ယွန်းချီတို့လို ကျောင်းသားလေးတွေပဲ များကြတယ်။ ဒါပေါ့ တချို့ ဒီမြို့က မခွာချင်တဲ့ သူတွေကလည်း ယွန်းချီတို့ရဲ့မြို့လေးမှာပဲ အခြေချစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ကြတာပေါ့။ အချုပ်ပြောရရင်တော့ သူတို့မြို့လေးက သိပ်ခေတ်နောက်မကျတဲ့ မြို့လေးပါ။
"မထင်မှတ်ဘဲ မင်းသိတဲ့ဆိုင်ကလည်း ဒီဆိုင်ဖြစ်နေတယ်..."
ယွန်းချီစကားကြောင့် ကြက်မောက်သီးလေးတစ်ယောက် သူ့နားထင်သူကုတ်ပြန်တယ်။ ဒါက သူ စိတ်အိုက်ပြီး ရှက်နေရင် လုပ်တတ်တဲ့ပြုအမူလေးတစ်ခုပေါ့။
"အင်း... ငါတို့တူသွားတာပေါ့ မင်း အမြဲတမ်း ဒီမှာပဲ ညှပ်နေကြလား..."
ဘာကြောင့် ယွန်းချီနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေထုတ်နေမိမှန်း သူ့ကိုယ်သူနားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ယွန်းချီနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ တစ်ခုပြီးတစ်ခုသိရတာကို သဘောကျတယ်။
ယွန်းချီကိုသူ နောက်တစ်ခွန်းဆက်ပြောမဲ့အချိန်မှာ ဆံပင်ညှပ်ဆရာက အချိန်ကိုက်ရောက်လာတော့တယ်။ ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက် စိတ်ကသိကအောက်နဲ့။
ယွန်းချီဆိုတာကလည်း သူ့ဆံသဆရာလေးရဲ့ အသံကြားတာနဲ့ ဆတ်ခနဲကောက်ထလိုက်တာ ခွေးစာခွက်လေးကိုက်ပြီး အမြီးယမ်းယမ်းနဲ့ သခင့်ဆီပြေးသွားတဲ့ Pomeranian puppy လေးကျနေတာပဲ။ မကျေမနပ်နည်းနည်းလေး ဖြစ်နေရာကနေ ဆံသဆရာက ယွန်းချီရဲ့ကလစ်တွေကိုဖြုတ်ပြီး ဆံပင်ကို ကိုင်ကြည့်တာကို မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ခန့်ဝေကျော်တစ်ယောက် အူနုကျွဲခတ်ခံလိုက်ရသလိုပဲ။ ဆံပင်ညှပ်တဲ့ခုံပေါ်ရောက်ပြီးမှ ကိုင်တော့ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲ! စိတ်တိုစရာကောင်းလိုက်တာ! အဲ့လက်ကို ငါ သွားချိုးလိုက်ရ!
အဲ့ဒီလိုနဲ့ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက်က ဆံပင်ညှပ်နေတဲ့အချိန်တစ်ခုလုံးကို အံတကြိတ်ကြိတ်နဲ့ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ယွန်းချီကတော့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ စိတ်တိုဒေါသတွေကို မသိပေမဲ့ ဆံသဆရာအစ်ကိုကြီးကတော့ မျက်ထောင့်နီတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး လက်ခံရရှိနေတာပေါ့။
ဆံပင်ညှပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ ယွန်းချီရဲ့ အုန်းမုတ်ခွက်ကေဆံပင်လေးက ယွန်းချီနဲ့လှပနေတော့တယ်။ အရှေ့ကိုအကုန်ချလိုက်ရင် အုန်မုတ်ခွက်ကေလို အတိဖြစ်နေမှာကို ယွန်းချီက နည်းနည်းလေးခွဲထားလေရဲ့။ ပြီးတော့ ဘေးဆံပင်လေးတွေက ယွန်းချီနားရွက်လေးတွေကို အုတ်ထားသေးတယ်။ အုန်းမုတ်ခွက်ကေလို့ သူနာမည်ပေးထားတဲ့ hairstyle က ယွန်းချီနဲ့တော့ လှပနေပါတယ်။
မျက်မှန်လေးပင့်တင်ပြီးပြောတဲ့ ယွန်းချီကို ခန့််ဝေသော်ကြည့်တယ်။
မေးသာမေးတယ်။ ပါဝါနဲ့လို့တော့ သူ မထင်ပါဘူး။ ယွန်းချီရဲ့မျက်မှန်ကမှန်က တအားပါးလွန်းတယ်။ ဦးလေးရော အဒေါ်ရောက မျက်မှန်သမားတွေမို့ ပါဝါနဲ့မျက်မှန်တွေအကြောင်းကို သူ ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။
ပိုင်စိုးပိုင်နင်းပဲ ခန့်ဝေသော်က ဆံသဆရာရှေ့မှတင် ယွန်းချီမျက်မှန်ကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ အခုလိုပုံစံက သားရဲလေးတစ်ကောင်က သူ့မိတ်ဖက်ကို တခြားသူမသိဖို့ကို စစ်ခင်းလိုက်သလိုပါပဲ။ ဆံသဆရာက တအံ့တသြ ကြည့်ပေမဲ့ ယွန်းချီကတော့ သူ့မျက်လုံးကိုသူ အုပ်နေတာကြောင့် မသိခဲ့ဘူး။
"ဘာဖြစ်လို့လဲ မင်းမျက်လုံးက ဆံပင်မွှေးတွေ ဝင်ကုန်လို့လား?"
"မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ ငါ့မျက်လုံးက..."
ယွန်းချီလက်ကို ခန့်ဝေသော် ဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာ ယွန်းချီရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေက တကယ်ကိုလှလှလေးတွေ။ သူ ထင်တာမမှားဘဲ တကယ်ကို သူ့အလှနတ်ဘုရားမလေးနဲ့တူတယ်။
"မင်း မျက်လုံးတွေက ယွန်းနဲ့တော်တော်တူတာပဲ..."
တူမှာပေါ့ ငါတို့ကတစ်ယောက်တည်းပဲကို! ယွန်းချီစိတ်ထဲကနေ ခန့်ဝေသော်ကို ငတုံးလို့ကျိန်ဆဲလိုက်ပြီးတော့ ခန့်ဝေသော် လက်ထဲက သူ့မျက်မှန်ကို ပြန်လုတယ်။ နောက်တော့ သူ ခန့်ဝေသော်ကို ဘုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့...
"အဲ့ဒါကြောင့် မျက်မှန်တပ်ထားတာ ဟုတ်ပြီလား..."
စိတ်တိုတိုနဲ့ မျက်မှန်တပ်နေတဲ့ယွန်းချီကို ခန့်ဝေသော်ကြည့်တယ်။ ငွေရှင်းကောင်တာကို ခြေလှမ်းမဲ့အချိန်မှာ သူ ခပ်တိုးတိုးလေးပြောလေရဲ့။ ယွန်းချီနဲ့သူ နှစ်ယောက်တည်းကြားမဲ့ အသံမျိုးနဲ့ပေါ့။
ခန့်ဝေသော်စကားက ယွန်းချီကို စတော်ဘယ်ရီသီးတစ်လုံးလို နီရဲသွားစေခဲ့တယ်။
"ငါတို့ မနက်စာစားရဦးမယ်... သွားမယ်..."
ပြောပြီးတာနဲ့ ယွန်းချီ မပြေးရုံတမယ် ငွေရှင်းကောင်တာကို ထွက်သွားတော့တယ်။ ယွန်းက လှတယ်ဆိုပေမဲ့ ယွန်းချီကို လှတယ်လို့ ဘယ်သူမှ မပြောဖူးပါဘူး။ ယွန်းချီကို ပိုလှတယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က ပြောလာမယ်လို့ ယွန်းချီအိပ်မက်တောင်မမက်ဖူးဘူး။ သူ့မျက်နှာက ကြက်ဥတစ်လုံးကြော်လို့ရလောက်အောင်ကို ပူပြီးနီနေတယ်။ သူ့ရင်ကလည်း တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ပေါ့။ ခြေလှမ်းကျဲတွေနဲ့ ငွေရှင်းကောင်တာကို ထွက်သွားတဲ့ ယွန်းချီကိုလိုက်မီအောင် ခန့်ဝေသော် ဘယ်လောက်မှတော့ မလိုက်ရပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ယွန်းချီခြေထောက်လေးတွေက သူ့လောက်မှ မရှည်တာ။ ဒီလိုနဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ဟာ မနက်စာကို နေ့လည်မရောက်ခင်မှာ စားဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
Thoon ( sandrawn) 26.11.2019, 14:38 5
A yann twe tha baw kya nay p ㅠㅠ D ko pl move lr lite taw mal Kha 😛❤️
MaskMelon 25.11.2019, 04:49 5
ThiHla 25.11.2019, 03:44 4.9
Khant D 25.11.2019, 03:10 5
ရှက်သွေးဖြာနေတဲ့ အုန်းမှုက်ခွက်လေး !! ခစ်ေလိုက်တာ !!!